नयाँ बर्षमा बनाउन हुने र नहुने नयाँ योजना - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
‘नयाँ’ कसलाई मन पर्दैन होला र ? नयाँबर्षमा ‘नयाँ योजना’ ‘नयाँ काम’, ‘नयाँ सोंच’, ‘नयाँ बिचार’ ल्याउनैपर्छ । तर, हामीकहाँ केही चिज यस्ता छन्– जुन नयाँभन्दा पुरानोबाटै मज्जा लिनु उपयुक्त हुन्छ । ‘नयाँ लुगा’, ‘नयाँ ठाउँ’, ‘नयाँ गाडी’, ‘नयाँ मोबाइल’जस्तै प्रेमी, प्रेमिका, श्रीमान र श्रीमतीपनि ‘नयाँ’, खोज्न थालियो भने, बुझ्नोस्– तपाईं हाम्रो मन मन्दिरमा खतराको घण्टी बज्न थाल्यो ।
तर, हामीले अब नयाँ खोज्यौं भने, नयाँ नेता र पार्टीले पनि उही प्रकृया दोहोऱ्याउने हुन्–आफुलाई, आफ्नालाई र आफन्तलाई ! अनि हाम्रो पालो आईपुग्न त थप थप पन्ध्र बर्ष कुर्नु पर्नेछ । हामीसँग स्यालले खाएपनि नसकिने पार्टी छन् । ध्रुबे हात्तीले कुल्चिएपनि अभाव नहुनेगरी नेताहरु छन् । त्यसैले नयाँ बर्षमा नयाँ नेता र नयाँ पार्टीको भिंड हैन, भएकैलाई ‘पुर्ननिर्माण’ गरेर अगाढी बढ्ने प्रयत्न गरौं । तर नेताको ‘पूर्ननिर्माण’चाहीं कसरी गर्ने हो, त्यो तरिकाचाहीं नयाँ बर्षमा खोजौंला !π अहिलेलाई ‘ह्याप्पी न्यू इयर २०७४ । रातोपिरोबाट